Ungayibhala Kanjani Ingxoxo yePodcast ku-Skype | Martech Zone
NgoMgqibelo, ngoMeyi 23, 2015 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Manje sesinezicucu zethu ezimbili Zengxoxo Yesazi evuliwe i-Podcast yethu futhi ihambe kahle ngendlela emangalisayo. Sesinayo Umphetho Womsakazo Wewebhu okuyimpumelelo futhi kwenziwe ngokubambisana nabalingani bethu eSite Strategics. Ngezinye izikhathi, noma kunjalo, sasifuna ukuthatha ukujula okujulile nge uchwepheshe ngenkathi i-EdgeTalk igxile ku isihloko.
Nongoti ezweni lonke, cishe akunakwenzeka ukulinganisela uhlelo lwawo wonke umuntu ukuze angene estudiyo kwinhlolokhono, noma kunjalo! Sinqume ukuthi indlela engcono yokwenza lokhu ukwenza iphrojekthi eseceleni bese sisebenzisa i-Skype neGarageband ukuyidonsela ndawonye. Sacela usizo lwephayona uBrad Shoemaker kusuka I-Creative Zombie Studios ukwakha izikhangiso zethu, izingeniso kanye nokuphuma. UBrad usebenzise neqembu lomngani wami omkhulu, Joyina Abafile, ngemuva.
Sibe sesihlola inqwaba yezindlela zokuqopha izingcingo futhi sathola ukuthi ukuqopha ikholi ye-Skype kwakuyindlela elula kunazo zonke. Sithole Shayela irekhoda ye-Skype kusuka ku-Ecamm wabonwa ngemali yesikhathi esisodwa engu- $ 29.95! Umrekhoda uyavela bese uqala ngokuzenzakalela ngalo lonke ucingo - aqopha zombili ividiyo nomsindo. Ngakho-ke - uma ubufuna, ungenza izingxoxo zevidiyo ngale ndlela futhi!
Siphinde sahlola ithoni yemakrofoni futhi ukusetha okulula kakhulu nokuphumelela esikutholile kumane ukusebenzisa indlela ye- I-Logitech ClearChat Comfort / ihedisethi ye-USB. Kubukeka noma kunini lapho umsindo uphuma kuzipikha zokubonisa, kuphazamisa ukuqopha ngakho-ke ngisebenzisa ihedsethi nje.
Isinyathelo esilandelayo ukudonsela okuqoshiwe kwiGarageband. Ngimane ngidonsela ifayili kuthrekhi bese ngithola wonke umsindo engifuna ukuwususa ngokuhlukanisa ithrekhi bese ngisusa imisindo engadingekile. Ngibe sengingenisa isingeniso sethu somsindo, izikhangiso, ne-outro. Ngihlukanisa amathrekhi lapho ngifuna ukuthi izikhangiso zihambe khona bese ngidonsela imisindo ngayinye kuthrekhi ngayinye ukuze imbondelane kahle.
Ngenxa yesisekelo esikhulu sababhalisile esakhele kuso IBlogTalkRadio, sisingatha futhi siphakamise i-podcast yethu lapho futhi siyisakaze nge-iTunes, Stitcher, nakwezinye izindawo eziningi. I-BlogTalkRadio ine-studio sayo kodwa yisikhathi sangempela, irekhoda bukhoma engenandlela yokulungisa izingqinamba ngomsindo. Sonakalise i-podcast eminingi sizama ukuyenza bukhoma!
Ingxoxo kaDrew Burns
Ingxoxo kaScott Brinker
Inothi elilodwa kulokhu - ngaso sonke isikhathi lapho ngibonakala ngiphumelela kulokhu eGarageBand, bashintsha i-Interface nezindlela. Ungishayela amantongomane!
Lokhu kwanele manje. Mina noBrad sibheke esikhathini esizayo lapho singaletha khona imishini ethile esizeni nasemicimbini - kanti uBrad angaxuba umsindo futhi aqinisekise amazinga afanele kude nesitudiyo sakhe. Kuzoba wutshalomali oluncane, kepha ngokuyisisekelo luzosinikeza isitudiyo esiphathekayo esingasisebenzisa noma kuphi - ehhovisi lethu noma esikhungweni esithile senkomfa. Uma nje sinomkhawulokudonsa, sizokwazi ukuhlanganisa i-podcast yobuchwepheshe.
Tags: umthungi wezicathuloisabelomaliama-studio we-zombie wokudalainethiwekhi ye-ecammibhande legarajiUkumaketha i-Podcasthlanganisa i-podcastizingxoxo ze-podcastqopha i-podcastqopha skypeirekhodi skype interviewskype rekhodaskype ukurekhoda
Ungayithuthukisa Kanjani Isu Lakho Lokumaketha Lokungaphumeleli